यस कारण गरिन्छ शिवलिंगको पूजा ! यस्ताे छ धार्मिक र आध्यात्मिक मान्यता – Sunaulo Nepal TV
लिंग पुजा गर्नुका केही कारण यस्ता छन्: शिवलिंग मान्यताको अनुसार, लिंग एउटा बिशाल लौकिक अन्डाशय हो जसको अर्थ पूरै ब्रह्माण्डको प्रतीक हो ।
शिवलिंगका बारेमा दुई एक पटक ब्रह्माजी र विष्णुजीबीच विवाद उत्पन्न भयो । ब्रह्माजीले सृष्टिकर्ता भएको कारणले श्रेष्ठ भएको दावी गरे र विष्णुले सृष्टिको पालनकर्ता भएको कारणले आफू श्रेष्ठ भएको दावी गरे । त्यसपछि त्यहाँ एक विशाल लिंग उपस्थिति भयो र दुवै देवतामा सहमतिले यो निश्चय गरियो कि
जसले यो लिङ्गको समाप्ती बारे पहिला पत्ता लगाउछ त्यो नै श्रेष्ठ हुनेछ । दुवै जना विपरित दिशामा शिवलिंगको समाप्ति खोज्न निक्लिए । तर उनीहरुलाई कुनै समाप्ति मिलेन यसले उनीहरुमा यो ज्ञात हुन्छ कि शिवलिंग नै अनन्तकाल हुन् ।
Previous विभिन्न गेडागुडी मिसाएर टुसा उमारेको गेडागुडी स्वास्थ्यका लागि यति धेरै फाइदाजनक ! सबैले जानीराखौं
Next विवाहित महिलाहरु परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् किन ?